လူမီနီယမ် Window မျက်နှာပြင် - တရုတ် Hebei Samsung ကသတ္တုဝါယာကြိုးကွက်
လူမီနီယမ် Window ဖန်သားပြင်
လူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်လွင်ပြင်ယက်လုပ်ခြင်းဖြင့် al-မီလီဂရမ်အလွိုင်းဝါယာကြိုးများ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမီနီယမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဝါယာကြိုးကွက်နှင့်လူမီနီယံအလွိုင်းဝါယာကြိုးများနှင့်သန့်စင်သောလူမီနီယံဝါယာကြိုးနှင့်အတူသီးခြားစီနှင့်အတူယက်စင်ကြယ်သောလူမီနီယံဝါယာကြိုးကွက်: လူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးကွက်နှစ်ခုအတန်းသို့ကျရောက်ပါတယ်။ အယ်လ်ခြင်မျက်နှာပြင်အရောင်: Silver, တောက်ပသို့မဟုတ်မီးသွေး။ လူမီနီယမ်အလွိုင်းအင်းဆက်ပိုးစစ်ဆေးခြင်းဖန်မျှင်ထည်ပေမယ့်အများကြီးပိုမိုတာရှည်ခံ mesh ထက်ပိုစျေးကြီးသည်။ လူမီနီယမ်စိစစ်ပုံမှန်အားဖြင့် 18 x ကို 16 ကွက်, သင့်လျော် 0,011 အချင်းစိစစ်၌ခက်ခဲတဲ့နှင့်တာရှည်ခံသည် ...
လူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင် လွင်ပြင်ယက်လုပ်ခြင်းဖြင့် al-မီလီဂရမ်အလွိုင်းဝါယာကြိုးများ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလူမီနီဝါယာကြိုးကွက် နှစ်ခုအတန်းသို့ကျရောက် လူမီနီယမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဝါယာကြိုးကွက် များနှင့် သန့်စင်သောလူမီနီယံဝါယာကြိုးကွက် လူမီနီယံအလွိုင်းဝါယာကြိုးများနှင့်သန့်စင်သောလူမီနီယံဝါယာကြိုးနှင့်အတူသီးခြားစီနှင့်အတူယက်။
အယ်လ်ခြင်မျက်နှာပြင် အရောင်: Silver, တောက်ပသို့မဟုတ်မီးသွေး။
လူမီနီယမ်အလွိုင်းအင်းဆက်ပိုးစစ်ဆေးခြင်း ထက်ပိုစျေးကြီးသည် ဖန်မျှင်ထည် mesh ပေမယ့်အများကြီးပိုမိုတာရှည်ခံ။
လူမီနီယမ်စိစစ် ပုံမှန်အားဖြင့် 18 x ကို 16 ကွက်အများစုတံခါးကိုနှင့်ပြတင်းပေါက် application များအတွက်သင့်လျော်သော 0,011 အချင်းစိစစ်၌ခက်ခဲတဲ့နှင့်တာရှည်ခံသည်။ လူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင် သံချေးသို့မဟုတ်အနာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လိပ်သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းပိုင်းထောက်ပံ့။
အင်းဆက်ပိုးကွက် အလင်းအလေးချိန်, ကောင်းသောချေးခုခံနှင့်သံချေးခုခံရှိပါတယ်
လျှောက်လွှာ: အမျှ အင်းဆက်ပိုးမွှားစိစစ် သို့မဟုတ်အရိပ်ယင်ကောင်များနှင့်ခြင်ဆန့်ကျင်, စက်ပစ္စည်းကာကွယ်မှု, လေဝင်လေထွက်ပစ္စည်းနှင့်လက်ခံရရှိအချက်ပြမှုများ။
ဒါကြောင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားကွက် install လုပ်နည်းလွယ်ကူသောပါသလဲ
အင်းဆက်ပိုးကွက်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးပေါင်းခိုင်မာတဲ့ကတ်ကြေးနှင့်အတူအဖြတ်, ပြီးတော့ရိုးရှင်းစွာအရပျသို့ stapled သို့မဟုတ်လျှက်ရှိကြောင်းနိုင်ပါသည်။
အင်းဆက်ပိုးမွှားကွက်များ၏သက်တမ်းကိုသုံးပစ္စည်းအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ဖြတ်ဖို့ဘာသာရပ်သည်မည်မျှမကြာခဏ။ ကျနော်တို့ရောင်းချအရှိဆုံး Hard-ဝတ်ထားကွက်သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဤဖြစ်စေများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် သံမဏိ သို့မဟုတ် လူမီနီယံ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖိုက်ဘာမှန်နဲ့ PVC coated သံမဏိကွက် စျေးနှုန်းချိုသာအခြားနည်းလမ်းများမှာ, ဒါပေမယ့်အကျိုးဆက်သူတို့ကပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြပြီးသာအိမ်တွင်းကိုအသုံးပြုရပါမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကွက် အများကြီးတန်ခိုးကြီးပြီးနိုင်လွန် core ကိုအတူ polyester ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးချဲ့နှင့်အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ ယက်အင်းဆက်ပိုးမွှားကွက် ?
အတော်လေးရိုးရှင်းစွာသည်ကျယ်ပြန့်ကွက်အားကောင်းနှင့် bends အခါယက်ကွက်ဖြတ်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ထဲကတင်နိုင်တာလွယ်သော်လည်း၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်စောင့်ရှောက်။
သင်သည်သင်၏ဝယ်ယူနှင့်အတူမည်သည့်အကူအညီလိုလျှင် 0086-311-69013206 အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းသို့မဟုတ်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး အီးမေးလ်က သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်ပေါ်မှာ။
ယခင်: ကွင်းဆက် Link ကိုခြံစည်းရိုး
နောက်တစ်ခု: အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေ Gabion mesh
လူမီနီယမ် Window မျက်နှာပြင်